Aseesaa - Sirba Aadaa Shamarranin Birraatti Sirbamu
Fulbaana 12, 2018
Artiist Hawwii Tazarraa Qunnii hookan Ingiccaa qabatee
Aseesaa... goofaaree gootaa.... abaaboon dhootee hooda...birraan bariitee hooda...
Booruun gannaa darbee booqaan birraa yeroo dhufu, yeroon birraa, shamarran eddu-gala Oromiyaa biratti hiikaa addaa qaba. Haawaasni waliigala Irreechaa, ateetee, wadaaja fi sirnoota adda addaa akkuma amantiifii fedhii saatti oggaa kabaju, shamarranii fi ijoolleen dubaraa xixinnoon immoo guyyaa buqqisaatif Fulbaana tokko of fuunduratti lakkahatii eeggan.
Dubaraaf, wayaa haaraatu bitamaaf. Fulbaana tokkoo immoo hiriyoota ofii wajjiin wal arganii wajjin, “Aseesaa goofaaree gootaa abaaboon dhootee hooda...birraan bariitee hooda - jechuudhan sirbaanii gammadan. Manarra deemanii ingiccaa hiraatii dhadhaa fi maallaqa badhaafaman.
Artiis Hawwii Tazarraa sirba aadaa kana godinoota Shawaa keessaa qorachuudhan mana muuziqaatti qindaahe akka hojjatamu gootetti. Ammas, irratti hojjachaa jiraachuu dubbatti. Gaafiifi deebii artiist Hawwii wajjin godhame dhaggeeffadhaa.​
Aseesaa - Sirba Shamarran Qaametti Sirban
US, Fulbaana 11, 2001, gaafa nama isii 3,000 tahu guyyaa tokkotti irraa fixan kaan hardha miira hammaachaa qaabachaa oolte
Warra Maleessa Ta’een Guddadhe Dabaree Koo Warra Maleessan Gargaara
''Bara dhufu waan heerumuuf amma booda qunni buqqifachuu hin danda'u''